Kudzoka / Kuchinja Gwara mukati meUS - MORPH Zvipfeko
Kudzoka / Shanduko Yemutemo mukati meUS
Kutanga Kudzoka / Shandura HERE
US inodzoka nekuchinjana:
Mutemo wedu unoshanda kwemazuva makumi matatu. Kana mazuva makumi matatu apfuura kubva pawakatenga, isu hatigone kukupa iwe kudzoserwa, kuchinjana kana chitoro chechitoro.
Ndapota dzokera nguvo yako mukati memazuva gumi nemana kana Exchange nguvo yako mukati memazuva makumi matatu.
Kuti uve unokodzera kudzoka kana kuchinjanisa nguvo yako, chinhu chako chinofanira kunge chisina kuvhurwa, uye muchimiro chimwe chete chitsva chawakagamuchira. Hapana zvinonhuhwirira, mamaki anonhuhwirira nezvimwe zvakadaro. Kudzoka kwako / kuchinjana kucharambwa kana nguo yacho iri mune isingasviki mamiriro matsva.
Kuti upedze kudzoka kwako, ndapota shandisa iyo Dzoka Portal, pinda nhamba yako yekuodha (inowanikwa pane yako email yekusimbisa pakutenga) uye yako email kero.
Ndokumbirawo usayedze kudzoka kana nguo yako isiri yayo mamiriro epakutanga, kana mazuva gumi nemashanu apfuura kubva musi wekutenga.
Ndokumbirawo usayedze kuchinjana kana nguvo yako isiri mumamiriro ayo epakutanga, kana mazuva makumi matatu apfuura kubva musi wekutenga.
Kudzoserwa uye Shanduko (kana zvichibvira)
Kamwe kudzoka kwako kuchinge kwagamuchirwa nekuongororwa, isu tinokutumira iwe email yekukuzivisa iwe kuti tagamuchira chinhu chako chakadzorerwa. Isu tichakuzivisawo nezve kubvumidzwa kana kurambwa kwekudzoserwa kwako kana kuchinjana.
Kana iwe ukatenderwa, ipapo yako yekudzosera ichagadziriswa, uye kiredhiti ichazongoerekana yaiswa kune yako kiredhiti kadhi kana yekutanga nzira yekubhadhara, pamutengo wakabhadharwa wenguo.
Zvadaro, taura nebhangi rako. Iko kunowanzotora nguva yekugadzirisa kusati kwadzorerwazve.
Kana iwe waita zvese izvi uye usati wagamuchira yako yekudzoserwa parizvino, ndapota taura nesu pa info@morphclothing.com.
Zvinhu zvenguva dzose zvemutengo chete zvinogona kudzoserwa, zvinhu zvekutengesa hazvigone kudzoserwa, zvinongochinjaniswa.
Kana uri kutumira chimwe chinhu kupfuura $ 75, unofanira kufunga kushandisa shanduro yekutumira kana kutenga inshuwarisi yekutakura. Hatisi vimbiso yokuti tichagamuchira chinhu chako chakadzorerwa.
Kuti udzore chinhu chako ndapota tsamba ku:
MORPH Zvipfeko, 75 Vincent Drive, Mount Pleasant, SC 29464
Iwe uchave nebasa rekubhadhara iwe wega mari yekutumira yekudzosera chinhu chako. Mari yekutumira haina kudzoserwa. Kana iwe ukatambira kudzoserwa, mutengo wekutakura uchabviswa kubva kune yako kudzoreredza. (Yakazobhadharwa - kutumira = kudzoreredza).
Zvichienderana nezvamunogara, nguva inogona kutora kuti iwe unoshandiswa mutengo kusvika kwauri unogona kusiyana.
Pakugamuchira uye kubvumidzwa kwekutsinhana kwako, inivhoyisi ichatumirwa kwauri yemitengo yekutumira kuendesa chinhu chako chitsva. Ndokumbira utitumire katsamba pamwe nekuchinjana kwako kana katsamba kubva kunzvimbo yedu yekudzoka maererano nemaitiro aungade kuti chinhu chako chitsva (s) zvitumirwe, kureva. USPS, Kukoshesa, UPS, Yekutanga Kirasi Yepasi Pose. Kana iyo invoice yabhadharwa chinhu chako (s) chichaendeswa.
Ndinokutendai pamberi pekunamatira kune yedu kudzoka / shanduko mutemo.